फिनल्याण्ड को झण्डा। झण्डा र फिनल्याण्ड को काखमा को कोट। इतिहास र फिनल्याण्ड राष्ट्रिय झण्डा को महत्त्व
सबै देशहरूमा, झन्डा, प्रतीक र गान statehood को प्रतीक हो। यो कुनै अपवाद र फिनल्याण्ड छ। तर यो देश एक अपेक्षाकृत ठूलो शक्ति वर्ण आफ्नै विशेषताहरु छन्। राष्ट्रिय, राज्य र राष्ट्रपति: आधिकारिक तीन अलग अलग प्रकार मा फिनल्याण्ड को झन्डा द्वारा अनुमोदित। वर्ण, साथै यसलाई अहिले देखिन्छ बाटो को इतिहास, हामी विचार गर्नेछौं।
झन्डा को इतिहास
1556 मा, फिनल्याण्ड को XII शताब्दीमा आक्रमण Swedes केही स्वतन्त्रता पाए। नयाँ प्रादेशिक एकाइ - को Duchy - दुई वर्ष पछि अपनाए हतियार को कोट। उहाँले रातो पृष्ठभूमि मा एक सुन सिंह चित्रण गरिएको थियो लगाउँथे। को heraldic पशु यसको हिंद खुट्टा मा खडा र उनको टाउको मा मुकुट थियो। को gauntlet मा साङ्लोले बाँधेर राखियो जो सही अगाडि पन्जा, जनावरको एक चाँदी तरवार पकड थियो। फिनल्याण्ड रूपमा स्वीडेन को एक भाग बारम्बार लडे छ जो संग पोल्याण्ड को एक प्रतीक - लियो बाङ्गो तलवार चाँदी रंग propped। नौ चाँदी गुलाब okantovyvayut यो तस्बिर सबै। तसर्थ, रातो र सुन थिए राज्य "रंग liveried"। 1809 मा, देश इम्पेरियल रूस पाउनु भएको छ। को क्राइमन युद्ध पछि, त्यहाँ बाल्टिक कलोनी को बंदरगाहों गर्न श्रेय थिए जो जहाज, को मानक बारेमा प्रश्न थियो। त्यो स्वतन्त्रता को स्थिति थियो र फिनल्याण्ड को ग्रैंड Duchy भनिन्छ हुनाले यसलाई उनको झन्डा दिन निर्णय भएको थियो। छिट्टै रूस, Konstantin को सम्राट अलेक्जेन्डर द्वितीय को भाइ अघि, उहाँले Nuland मा यट क्लब स्थापना र यसको लागि लोगो संग आए - सेतो पृष्ठभूमि मा एक सीधा ब्लू क्रस। फिनल्याण्ड को आधुनिक झण्डा आधारको रूपमा यो तस्बिर लिए।
रूस देखि छुट
के अर्को भयो? फिनल्याण्ड को डी facto स्वतन्त्रता illusory थियो। महान् ड्यूक रूस को सम्राट थियो। वर्ष मा 1910-1916 किन तीन रंगीए माथिल्लो बायाँ कुनामा Suomi को मानिसहरूमाथि साम्राज्य को नियम प्रतीकको रूपमा देखा, प्रबलित Russification chauvinists गरियो। तर बित्तिकै फेब्रुअरी क्रान्ति को रूप मा, फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू रूसी हैकम सबै संकेत नष्ट गरे।
तर मानिसहरूले एक सहमति आउन सकेन। केही बस बन्द रूसी झण्डा मा तल्लो ब्यान्ड चोर्नु र अरूलाई प्रयोग गरेका छन् रातो ब्यानर, सुनको सिंह सजी जो। सुन स्कैंडिनेवियाई पार संग लाल रंग कपडा (छोटो crossbar ठाडो माउन्ट छ): फेब्रुअरी 1918 मा, सीनेट फिनल्याण्ड को झण्डा बित्यो। तर युद्ध देखि "रातो" पूर्ण जनसंख्याको नजरमा नै बदनाम, मे 1918 मा, सीनेट राष्ट्रिय झण्डा को रंग परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरूले सेतो र नीलो थिए। फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू आफ्नो कवि 1862 मा यी रंग लिन सीनेट उक्साए गर्ने Sakariasa Topelius, शब्दहरू याद छ। देश को एक हिउँ छोपेको क्षेत्रहरू, र नीलो - - यसको असंख्य पोखरी छ त्यो सेतो बताए। तथापि, 1920 मा, फिक्का कन्फ्लावर नीलो रंग गाढा नीलो द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ। यो पनि प्रतीक परिवर्तन भएको छ। यसमा सिंह यसको मुकुट गुमाए।
देश को आधुनिक राज्य प्रतीक
झण्डा र फिनल्याण्ड को काखमा को कोट जुन 1, 1978 देखि देश को कानून स्वीकृत। उहाँले संशोधन रूप मा, बीसौँ वर्ष गर्न अठारौँ को निर्णय quashed। गाढा क्रूसमा को, लगभग कालो हतियार अब तीव्र नीलो हुन्छन्। सिंह को सही अगाडि पन्जा मानव हातमा गरियो। तर militaristic तरवार अझै पनि त्यहाँ - बाह्य शत्रुहरू विरुद्ध लड्न इच्छुकता एक प्रतीक। झन्डा उठाएको हुनुपर्छ जब यो पनि तीन व्यक्ति र मिति ब्यानर डिजाइन गरिएको छ। राष्ट्रपति Oriflamma र सशस्त्र सेना को मानक अलग थिए। कोर मा, तिनीहरूले सम्पूर्ण देश को राष्ट्रिय झण्डा आधारित, तर तीन braids र विशेष संकेत-प्रतीक द्वारा complemented छन्।
फिनल्याण्ड राष्ट्रिय झण्डा
Siniristilippu - «sinekrestny" - यति प्यार नागरिक झण्डा फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू रूपमा ज्ञात। यो धेरै सजिलो छ। 11 यो स्कैंडिनेवियाई नीलो (अर्थात् उल्टो नजिकै) पार सजी: राष्ट्रिय झण्डा चौडाइ गर्न लम्बाइ नातेदार हो जहाँ 18 एक आयताकार सेतो प्यानल छ। मुख्य अक्ष गर्न पार सदस्य नातेदार को लम्बाइ एघार तीन छ। नीलो पार बारहरू को चौडाई कडाई नियमन छ: तीन सम्बन्ध मा एघार गर्न सम्पूर्ण कपडा गर्न। तेर्सो (मुख्य) अक्ष आधा कडाई झण्डा विभाजन गरेको छ। फोटो देख्न सकिन्छ रूपमा, क्रूसमा सेतो समकोणहरू दुई जोडी खेल्छ। 11 चौडाई ब्यानर: को FLAGPOLE नजिक छन् कि ती, अनुपात5छन्। 11 सामाग्री वेब चौडाई: झन्डा को नि: शुल्क किनारा मा समकोणहरू एक लम्बाइ, 10 हुनुपर्छ। को transverse पार गर्न तीन पाँच को अनुपात मा झन्डा विभाजन गरेको छ।
को Reigning देश मा एक सफेद पृष्ठभूमि रङ र प्रतीक नीलो पार। फिनल्याण्ड यस duality निहित झण्डा, भ्रम धेरै उत्पन्न अन्य राज्य अमेरिका मा औपचारिक मात्र एक नमूना ब्यानर अपनाए किनभने। तर तपाईं हेर्न भने, स्थिति धेरै सरल छ। राष्ट्रिय झण्डा पनि परिवार बिदा वा funerals गर्न, जो कोहीले र कुनै पनि अवसरको लागि उचाल्न सक्छ। साथै, तिनीहरूले फिनल्याण्ड सबै जहाज संग सजाया छ। सरकार ब्यानरहरू स्पष्ट आधिकारिक राष्ट्रिय बिदा को मिति तोकिएको मात्र खडा छन्। साथै, तिनीहरूले भन्दा flagpoles मा उडान गर्दै संसद को हाउस, सरकार र मंत्रालयों, केन्द्रीय सार्वजनिक अधिकारीहरु र कोर्ट। तिनीहरूले फिनल्याण्ड, केन्द्रीय बैंक, सीमाना गार्ड, पेन्सन कोष, सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थाहरु को दूतावास संग सजाया छ।
के राज्य झण्डा राष्ट्रिय फरक छ? केवल दुई बीम पार को चौराहे मा हतियार को कोट को उपस्थिति। हामी सम्झना, यो रातो पृष्ठभूमि मा एक व्याप्त सुन सिंह छ। जनावरको पंजे पंजे मा एक saber मा एक तरवार र trampling धारण। सौन्दर्य लागि रातो वर्ग पहेंलो बोर्डर प्रतीक जसको चौडाई crosspieces को मोटाई को एक-fortieth छ फ्रेम।
फिनल्याण्ड को राष्ट्रपति झण्डा
यो राष्ट्रिय र राज्य ब्यानर बाहेक स्कैंडिनेवियाई देश braids संग ब्यानर - पनि kielekkeinen valtiolippu प्रयोग गरिन्छ। कसरी "दाँत" संग फिनिस झण्डा? आफ्नो समकक्षों देखि कपडा को नि: शुल्क किनारा तीन कपडा त्रिकोण संलग्न कि विशेषता छ। औसत "plaits" मा आधारित पार को नीलो आधार आसन्न छ र यसको चौडाइ बराबर छ। र माथिल्लो र तल्लो ट्यूटोरियल निःशुल्क कोण मा सम्बन्धित जाले गठन। सबै तीन cutouts plaits ब्यानर को चौडाई को 5/11 को एक गहिराई, र आफ्नो लम्बाइ एघार निःशुल्क कपडा छेउको एक छैटौं हुनुपर्छ। दाँत संग मानक प्रतीक वा राष्ट्रपति, देश को सैन्य विभाग। बढी सही सदस्यता शीर्ष बायाँ बक्स (को FLAGPOLE नजिक छ कि एक) ध्यान चित्रकला परिभाषित गर्न सकिन्छ। Oriflamme मा गणतन्त्र को राष्ट्रपति त्यहाँ स्वतन्त्रताको क्रस flaunts। उहाँले सुनको (पहेंलो) रंग छ।
फिनिस झण्डा सैन्य
Plaits मात्र होइन राष्ट्रपति Oriflamme छन्। फिनल्याण्ड को सैन्य झण्डा, फोटो जो तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, पनि notched। यसलाई रक्षा को मन्त्री, सशस्त्र बलहरु र यसको विभाग को केन्द्रीय मुख्यालय को कमाण्डर द्वारा प्रयोग गरिएको छ। साथै, तीन दाँत संग ब्यानरहरू को कडी सैन्य कोर्ट सजाउनु। ब्यानर कमाण्डर, साथै राष्ट्रपति ब्यानर मा, क्रस दुई हतियार को चौराहे मा त्यहाँ फिनल्याण्ड को काखमा एक कोट छ। माथिल्लो बायाँ बक्स मा सशस्त्र बलहरु मा एक विशेष प्रतिमा छ।
को Swastika वा रुनिक साइन?
धेरै मान्छे को लागि, फिनल्याण्ड, फोटो तपाईं देख्न जो, को वायु सेना झण्डा एक तर्साउने छ। Swastika? फासिज्मको? सुदूर यसलाई देखि। सूर्य र यसको कारोबार designating यो rune चिन्ह, हिटलर उन्मत्त विचार दुनिया लिन छक्क परे लामो अघि, फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू द्वारा पूजा गरिएको थियो। पनि 1918 मा, एक Swastika फिनल्याण्ड को वायु सेना प्रतीकको रूपमा मान्यता थियो। दोस्रो विश्व फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू को वायु सेना को ब्यानर यो odious ब्याज हटाउन undertook, तर यो गरे कहिल्यै पछि। तिनीहरूले नाजीहरूले Swastika, लगाइदिए कि तर्क गर्दा सूर्य को प्रतीक - एक सीधा लाइन।
एक नागरिक मामला मा Supervisory अपील
युक्रेनमा परिचालन को विफलता लागि जिम्मेवारी। कानुनी रूपमा र निःशुल्क परिचालन नत्याग्ने कसरी
सामाजिक व्यवस्था: अवधारणा, प्रकार। सामाजिक सेवा। असक्षम व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
को क्राइमन मान्छे को लागि प्रसूति राजधानी: जो र यो प्राप्त गर्न कसरी गर्नुपर्छ
लोकप्रिय कार्टूनमा टेलिभिजनको नाम के हो?
शीर्ष - कान, आफ्नो सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष मूल्याङ्कन
पशु परजीवी। पराश्रयिता को प्रकार
"साहस" - ककडी Greenhouses
Borderline व्यक्तित्व विकार
को अन्तस्करणले मा बालुवा को उपचार छैन सौतेली गर्न सकिन्छ